Mbọ Ndị Mmadụ Na-agba Ịchọta Onyinye Kacha Mma
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zande Zulu
ISIOKWU ỤLỌ NCHE A | OLEE ONYINYE KACHA ONYINYE NIILE?
Mmadụ ịmata onyinye kacha mma ọ ga-enye mmadụ abụghị obere ọrụ. A sịdị kwuwe, ọ bụ onye e nyere onyinye ga-ekwu ma onyinye ahụ ọ̀ baara ya uru ma ọ bụ na ọ baghịrị ya uru. Ihe ọzọ bụ na ihe e nyere otu onye ya adị ya mma nwere ike ọ gaghị adị onye ọzọ mma.
Dị ka ihe atụ, e nye onye na-eto eto ihe dị ka ekwentị ọgbara ọhụrụ, o nwere ike ịdị ya ka è nyela ya ụwa niile. Ma onye toro eto nwere ike inwe ezigbo obi ụtọ ma e nye ya ihe dị ka ihe olu nne ya ochie ji kpọrọ ihe. N’obodo ụfọdụ, onyinye kacha amasị ma nwata ma okenye bụ ego, n’ihi na ọ ga-eme ka onye e nyere ya jiri ya mee ihe dị ya mma.
N’agbanyeghị na ịmata onyinye kacha mma a ga-enye mmadụ anaghị adịcha mfe, ike anaghị agwụ ọtụtụ ndị ma ha chọwa ihe kacha mma ha ga-enye onye ha hụrụ n’anya. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị mgbe niile ka anyị ga-amatali onyinye kacha mma anyị ga-enye mmadụ, ma e nwere ihe ndị anyị ga-eburu n’obi nwere ike inyere anyị aka. Ka anyị leba anya n’ihe anọ n’ime ha.
Ihe na-agụkarị onye ahụ. Otu nwoke bi na Belfast, nke dị n’Ebe Ugwu Ayaland kwuru na ígwè e nyere ya mgbe ọ dị ihe dị ka afọ iri ma ọ bụ iri na otu bụ onyinye kacha mma e nyetụrụla ya. Maka gịnị? Ọ sịrị, “Ọ na-agụsi m ike inwe ígwè.” Ihe ahụ o kwuru gosiri na ihe na-agụ mmadụ nwere ike ime ka ihe e nyere ya mee ya obi ụtọ ma ọ bụ ghara ime ya obi ụtọ. N’ihi ya, chee gbasara onye ị chọrọ inye onyinye. Gbalịa chọpụta ihe o nwere ike iji kpọrọ ihe, n’ihi na ọ bụ ihe mmadụ ji kpọrọ ihe na-agụkarị ya. Dị ka ihe atụ, ndị mpa nnukwu na ndị mma nnukwu anaghị eji ha na ụmụ ha ịnọrị egwu egwu. O nwere ike ịna-agụ ha agụụ ịna-ahụ ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha mgbe mgbe. Ọ bụrụ na ndị ezinụlọ ha na-eme, ha gụrụ gụrụ, ha na ụmụ ha agaa leta ndị mụrụ ha ma ọ bụkwanụ kpọrọ ha mee mkpapụ, o nwere ike ịtọgbu ha atọgbu karịa onyinye ọ bụla ọzọ a ga-enye ha.
Ihe ga-enyere mmadụ aka ịmata ihe na-agụ onye ọzọ bụ ịna-ege ntị nke ọma. Baịbụl gwara anyị ka anyị na-anụ ihe ngwa ngwa, ma ghara ịna-ekwu okwu ngwa ngwa. (Jems 1:19) Gị na ndị enyi gị ma ọ bụ ụmụnne gị na-akparịta ụka, gee ha ntị nke ọma ka ị mara ma ị̀ ga-achọpụta ihe na-amasị ha na ihe na-anaghị amasị ha. Ọ bụrụ na ị chọpụta ihe na-amasị ha, i nweziri ike inye ha onyinye ga-eme ha ezigbo obi ụtọ.
Ihe dị onye ahụ mkpa. Mmadụ nwere ike iji obere ihe e nyere ya kpọrọ oké ihe ma ọ bụrụ na o nwere mkpa o gbooro ya. Ma, olee otú ị ga-esi ama ihe dị onye ọzọ mkpa?
O nwere ike ịdị ka otú kacha mfe isi mata ihe dị onye ị chọrọ inye onyinye mkpa bụ ịjụ ya ihe ọ chọrọ. Ma, ọtụtụ anaghị achọ ka onye ha chọrọ inye ihe mara na ha chọrọ inye ya ihe. Ha na-achọkarị inye mmadụ onyinye dị mma onye ahụ na-atụghị anya ya. Ihe ọzọkwa bụ na ndị mmadụ nwere ike ịna-ekwu ihe ndị na-amasị ha na ihe ndị na-anaghị amasị ha, ma ọtụtụ mgbe, ọ na-esiri ha ike ịgwa mmadụ ihe bụ́ mkpa ha.
N’ihi ya, na-eleru anya ala ka i nwee ike ịchọpụta ihe ndị nwere ike ịdị onye ahụ mkpa. Jụọ onwe gị ma onye ahụ ọ̀ ka na-eto eto ka ò meela agadi. Ọ̀ lụọla di ma ọ bụ nwunye? Ya na di ma ọ bụ nwunye ya hà gbara alụkwaghịm? Di ma ọ bụ nwunye ya ọ̀ dị ndụ ka ọ̀ nwụọla? Ọ̀ na-arụ ọrụ ka ọ̀ laala ezumike nká? Chezie echiche ihe i nwere ike inye onye ahụ, ga-egboro ya mkpa ya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọta ihe dị onye ị chọrọ inye onyinye mkpa, jụọ ndị nọtụrụla n’ụdị ọnọdụ onye ahụ nọ na ya. Ha nwere ike ịgwa gị ihe na-adị ndị nọ n’ụdị ọnọdụ ahụ mkpa nke ọtụtụ ndị na-amaghị. I mee ya, o nwere ike ime ka i nye onye ahụ ihe ga-adị ya mkpa nke na-agaghị agbata ọtụtụ ndị n’uche.
Oge e nyere ya. Baịbụl sịrị: ‘Lee nnọọ ka okwu e kwuru n’oge ya si dị mma!’ (Ilu 15:23) Ihe a Baịbụl kwuru gosiri na oge anyị ji kwuo ihe ụfọdụ nwere ihe o mere. Ọ bụkwa otú ahụ ka ọ dị n’ihe gbasara inye mmadụ onyinye. Otú ahụ okwu e kwuru n’oge kwesịrị ekwesị nwere ike ime onye a gwara ya ezigbo obi ụtọ ka ihe e nyere mmadụ n’oge kwesịrị ekwesị nwere ike ime onye ahụ ezigbo obi ụtọ.
Oge ụfọdụ ndị na-ejikarị enye ibe ha onyinye bụ mgbe enyi ha na-agba akwụkwọ, mgbe onye na-eto eto na-agụcha akwụkwọ ma ọ bụ mgbe di na nwunye na-atụ anya ịmụ nwa ọhụrụ ha. Ụfọdụ ndị na-eme, n’afọ ọ bụla, ha edepụta ememme ndị pụrụ iche ha na-atụ anya a ga-eme n’afọ na-eso ya. Ọ na-emezi ka ha nwee oge ịchọta onyinye ga-adaba adaba n’oge ememme nke ọ bụla. *
N’eziokwu, i kwesịghị ichewa ka oge emmeme ruo tupu gị enye mmadụ onyinye. E nweghị oge i nyere mmadụ ihe, gị aghara inwe obi ụtọ. Ma, i kwesịkwara ịkpachara anya. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na e nweghị ihe doro anya mere nwa okorobịa ji nye nwa agbọghọ onyinye, nwa agbọghọ ahụ nwere ike chewe na o ji ya na-agwa ya na ọ chọrọ ka ha kpawa. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe nwa okorobịa ahụ bu n’obi, ụdị onyinye ahụ were ike ịkpata nsogbu. Ọ bụ ihe a mere anyị ga-eji leba anya n’ihe ọzọ dị mkpa, ya bụ́, ihe onye na-enye onyinye bu n’obi.
Ihe onye na-enye onyinye bu n’obi. Ihe atụ ahụ anyị mere gosiri na ọ dị mma mmadụ ibu ụzọ chee gbasara ihe onye ọ chọrọ inye onyinye ga-eche n’obi ya. Ihe ọzọkwa bụ na onye na-enye onyinye ahụ kwesịkwara ichebara ihe yanwa bu n’obi echiche. N’agbanyeghị na ụfọdụ ndị nwere ike iche na ha bu ezigbo ihe n’obi na-enye onyinye, ọtụtụ ndị na-enye onyinye n’oge ememme pụrụ iche n’afọ n’ihi na ndị ọzọ na-enye. Ebe ndị ọzọ na-enye ihe n’ihi na ha chọrọ ka e nyekwa ha ma ọ bụ ka e menyere ha.
Gịnị ka ị ga-eme iji buru ezigbo ihe n’obi na-enye onyinye? Baịbụl sịrị: “Ka ihe niile unu na-eme bụrụ n’ịhụnanya.” (1 Ndị Kọrịnt 16:14) Ọ bụrụ na ihe mere i ji nye mmadụ onyinye bụ n’ihi na ị hụrụ ya n’anya ma ọ bụ na ị chọrọ inyere ya aka, o yikarịrị ka ọ̀ ga-eji obi ụtọ anabata ya, gịnwa enweekwa ezigbo obi ụtọ. Mgbe ọ bụla i ji obi gị niile nye mmadụ ihe, ị na-eme Nna anyị nke eluigwe obi ụtọ. Pọl onyeozi jara Ndị Kraịst nọ na Kọrịnt mma mgbe ha ji obi ha niile nye onyinye iji nyere Ndị Kraịst ibe ha nọ na Judia aka ná nsogbu ha. Ọ gwara ha, sị: “Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.”—2 Ndị Kọrịnt 9:7.
Ichebara ihe ndị a anyị tụlerela echiche nwere ike inyere gị aka inye ndị ọzọ onyinye ga-eme ha obi ụtọ. E nwere ihe jikọrọ ihe ndị a anyị tụlere na ihe Chineke mere iji nye anyị onyinye kacha onyinye niile. Anyị na-agba gị ume ka ị gụọ isiokwu na-esonụ ka ị chọpụta ihe onyinye ahụ bụ.
^ para. 13 Ọtụtụ ndị na-enyekwa ndị mmadụ onyinye n’oge ha na-eme ncheta ụbọchị ọmụmụ ha ma ọ bụ n’oge ememme ndị ọzọ. Ma Baịbụl akwadoghị ihe a na-eme n’ọtụtụ ememme ndị ahụ. Gụọ isiokwu bụ́ “Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ, Sị: Ndị Kraịst, Hà Kwesịrị Ịna-agba Krismas?” Ọ dị n’Ụlọ Nche a.